ADY MORAINGY : Fialamboly mahasarika olona maro aty amin’ny faritra avaratra
Azo sokajiana ho fanatanjahan-tena no sady kolontsaina malagasy nentim-paharazana ny ady Morengy. 18 février 2020
Saika ahitana manao izany ny foko maromaro eto amintsika na dia samy manana ny anarana fiantsoana izany aza. Araka ny fantatra hatrany, ankoatra ny eto amintsika dia milalao ady moraingy ihany koa ny any amin’ny Nosy Rahavavy La Réunion ampiarahina amin’ny Maloya, ary Moringue no fiantsoana izany any an-toerana.
Raha ny aty amin’ny tapany avaratry ny Nosy no resahina dia ny foko Antakarana no milalao ady Moraingy izany tany am-boalohany, indrindra ny ao anatin’ny kaominina ambanivohitra. Natao ho fialamboly indrindra mandritra ny diavolana na diam-panjava. Kilandahiny no hilazana izany ary milalao ady tsy misy kisasy izay arahana akora na hirahira miaraka amin’ny amponga.
Mifandimby mifanatona ireo vatan-dehilahy samy tanora manatanteraka ny lalao ady Moraingy raha ny any ambanivohitra no resahina. Tsy misy tambim-bola izany taloha, tsy tahaka ny ankehitriny.
Amin’izao fotoana dia lasa fitadiavam-bola ho an’ny mpikarakara sy mpiady ny Moraingy. Andoavam-bola ny fidirana amin’izany ary indraindray anafarana mpanakanto malaza mandrotsirotsy ny mpijery sy ny mpiady. Nivoatra miandalana ny fikarakarana ny ady Moraingy aty amin’ny tapany avaratra ny Nosy ary efa misy ny fananganana ny fikambanana aty amin’ny Faritra Diana.
Na eo ny ezaka ataon’ireo mpikarakara sy mpiady Moraingy dia mbola tsy tafiditra ao anatin’ny ligy fa mbola tavela ary voasokajy ho « lutte sauvage » ny ady Moraingy hatramin’izao na eo ny fisian’ny fitsipika sy fananana mpanazatra ary mpitsara amin’ny fanatanterahana ny lalao.
Anisany lalao mampiavaka ny ato anatin’ny Faritra Diana ny ady Moraingy. Raha ny aty Antsiranana manokana no resahina dia ahitana toerana na kianja roa samihafa no hanatanterahina ny lalao. Raha oharina amin’ny lalao fanatanjahantena hafa dia azo lazaina fa mahasarika mpijery maro ny ady Moraingy. Miandahy, miambavy no mankafy izany izay natao ho fialamboly ho azy ireo.
Araka izany dia maniry ny mba hisian’ny ligin’ny ady Moraingy ireo mpanao izany mba hitovy amin’ireo taranja fanatanjahantena sasany.